Ny tsoakevitry ny dia tany Santiago de Chile
2010-06-10 @ 10:34 in Ankapobeny
Na raha atao lavalava kokoa ny lohateny dia izay rehetra azo notsoahina tamin'ny fihaonana natrehina tany Santiago de Chile. Raha izay ny lohateny natao tsy midika velively izany fa tsy nisy zavatra azo noraisina tany fa maro tokoa ny nahaliana tany na izany tamin'ny fivoriana na izany ilay toerana na tanàna nanaovana fivoriana mihitsy. Mampivoitra kosa aho ny tsikaritra sy ny zava-dehibe tamiko nandritra izany dia naharitra herinandro izany. Efa nihoatra ny iray volana sahady manko ilay fihaonana nefa tsy mbola azon'ny mpamaky eto akory ny voandalana avy amin'izany. Manararaotra ity tsy fahatomombanan'ny fiseraserana izao ity loatra aho vao tery hampahatsiahy izany vovonan'ny avy eo amin'ny Global Voices Online izany... Tsy maintsy misy tohiny hoe Online ny resaka eto fa zavatra hafa no mivoaka raha vao ny teny roa voalohany ihany no ikarohana rohy sy vaovao.
Santiago de Chile no anaran'ilay tanàna notsidihina. Maromaro ihany manko ny anara-tanàna antsoina hoe Santiago manerana izao tontolo izao ka dia io no anarana fanonontonon'ny mponina any. Raha tononina araka ny fanonona malagasy moa dia manao hoe Santiagô de Tsìle sady tsy moana ny "e" farany no tsy tononina mafy ihany koa, eo amin'ny "i" ny tsindrim-peo hanononana azy. Toy ny anaty koveta ihany ilay tanàna satria hodidinina tendrombohitra avo dia avo tokoa ny renivohitra. Maro dia maro tokoa ny sekoly tazana ao amin'ity tanàna ity ary misimisy ihany koa ny fiangonana (katolika) saingy vitsy dia vitsy ny mpivavaka hitanay tao amin'ny Katedraly raha nitsidika tao izahay ny alahady maraina. Maro dia maro ny mpianatra tazana rehefa mirava ry zareo, mitady hifanahatahaka ny Lisea na izay mitovy amin'ny Lisea aty amintsika sy ny Oniversite ary ny dingana mialoha ny Anjerimanontolo na Preoniversite ao amin'ity tanàna ity. Rehefa mivezivezy ny afovoan-tanàna ianao dia tahaka ny tanànan'ny mpianatra no tsinjonao hivezivezenao. Ahitana ny sehatry ny fandraharahana isan-karazany anefa ny toerana ary maromaro ihany ny banky sy ny toera-mpanakalozam-bola hitanao. Ny mponina indray amin'ny ankapobeny dia mitovy halava amin'ny malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy na ny lahy na ny vavy nefa dia tafita hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka erantany amin'ny baolina fandaka ry zareo.
Ao anatin'ny faritra fakana sary na azo akana sary ny toerana fivezivezenay ka nahafinaritra tokoa ny nandeha taminy. Midadasika tokoa ny arabe, nefa tsy ambakan'izany ny lalan'ny mpandeha an-tongotra. Tsy sarotiny taminay naka sary loatra ny mpitandro ny filaminana na mpiambina sivily mety ho hitanao na haka ny sarin'ny Lapan'ny filoham-pirenena ianao na halaina sary eo ihany koa, na haka sary izay rehetra hitanao any amin'ny tranom-bakoka. Ny olana taminay dia ny tahotra satria efa zatra loatra ny fandrarana maka sarina toerana na trano mahafinaritra izahay ka natahotra tamin'ny voalohany. Asa izay hahazo anao raha hoe eo anoloan'Ambohitsorohitra ianao no haka sary angamba, nefa izahay dia tsy naninona mihitsy ary tsy nisy niteny na dia teo anoloan'ny Palacio La Moneda (io ilay Lapam-panjakana iasan'ny filoha Chilena fiantso ny mponina any) aza no naka sary. Tsy nisy niteny anay ireo mpiambina ny banky samihafa raha naka sary azy ireny noho ny hankatony izahay, nefa manandrama anie ianao maka sary manakaiky banky raha tsy tabataba no ho azonao tahaka ireny hoe haka ny planin'ny banky ireny angamba ianao raha eto Madagasikara aloha. Indray maka moa teo Madagasikara dia azon'ny filazana mihitsy aho hoe fafao daholo ny sary azonao teo rah atsy tiana alaina ny fakantsarinao. Dia tsy haiko loatra aloha fa eo amin'ny tontolo frantsay sy amerikana angamba no tena be fandrarana tsy mahazo maka sary toerana izany fa tany Chile aloha izahay na miara-maka sary amin'ny mpitandro ny filaminana any aza tsy olana mihitsy.
Raha mahatsapa toy ny mafana antonony ihany aza izahay dia somary mahavariana ihany ny mahita ny mponina miaro ny tenany fatratra tsy ho azon'ny hatsiaka angamba sy ny fahamaroan'ny olona miakanjo mainty (tena niavaka mihitsy io akanjo matroka io). Raha mahita olona mpiborosy kiraro fahita any Amerika Latina ianao dia somary malotoloto kiraro kosa ny tanora any (misimisy ny manao tenisy malotoloto fa tsy rovitra). Tsy mahamenatra ny olona any ny mifampitantana sy mifanoroka ary mifampitsôda na dia eny an-dalambe aza. Nisy aza moa nilaza fa fahafinaretana ho azy ireo mihitsy izany hoe misy mijery izany ry zareo amin'iny fifanorohana lavalava iny. Gaga ny vahiny raha nahita io fihetsika io ary gaga ny Amerikana Latina raha nanao io fanamarihana io izahay, toy ny zavatra mandeha ho azy io any amin-dry zareo, nefa nisy ihany ny lasa vinany rehefa nolazainay ny langolangom-pitiavana tsy mahazatra anay vahiny indrindra fa ny Arabo, ny Aziatika ary ny Afrikana (ao anatin'ny Afrikana ny Malagasy) ka nanao hoe toa misy fanambaniana ny vehivavy tokoa ilay fihetsika.
Zavatra tsikaritra ihany koa dia ny tsy fahaizan'ny olona any teny anglisy na dia ny bitika aza fa dia teny epaniola ihany ho hainy. Raha mahay teny espaniola ianao izany dia tsy hanana olana fa izahay tsy mahay tsara afa-tsy ny teny fantsay koa aloha dia tena vahiny tanteraka tamin'ny toerana. Na eo aza anefa izany tsy fahaizana teny espaniola izany dia tokony ho tsy very mihitsy ianao raha manana sarintany ka mahay mamaky teny. Mameno ny tanàna mihitsy ny anaran'ny toerana izay diavinao indrindra moa fa eny amin'ny metro (izay tsara lavitra noho ny tany Paris hitako ny an-dry zareo no madio tokoa) ianao. Tsy misy manala na mangalatra ihany koa ny takelaby misy ny anaran-dalana sy ny laharan'ny trano ka tsy mahay anarana hotely na trano anavahana toerana toy ny ny hoe Vatobe na akondro na Mascotte na CCAC loatra ny mpanamory fiarakaretsaka raha ohariko amin'ny zavamisy eto Madagasikara ilay izy fa ny anaran-dalana sy ny laharan'ny trano ihany no miresaka any amin-dry zareo. Toy ny midika ihany izany fa mipetraka ihany fandaminana sy ny fandrafetana ny tanàna.
Hatreo aloha fa mety hisy tohiny indray angamba!
Jentilisa 09 jona 2010 amin'ny 00:23